အနှေးပြကွက်များထဲကရွှေအင်ကြင်းညို | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
တစ်နေ့က ရုံး၎ရက်ပိတ်တယ်။ ဒါနဲ့ ပျိုးလက်ဟန်ရဲ့  အနှေးပြကွက်များ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်မယ်လို့ စဉ်းစားမိတယ်။ မီးငယ်တစ်ဖြစ်လည်း ပျိုးလက်ဟန် ရဲ့  အဲဒီစာအုပ်ကို ရထားတာ အတော်ကြပြီ (၂၀၀၉ ဇူလိုင်ကတည်းက) ဖတ်မယ်ဖတ်မယ်နဲ့ တခြားစာအုပ်ပုံတွေထဲမှာ နစ်နေမိတာနဲ့ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာ ဒီနေ့တော့ ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါတောင် တစ်အုပ်လုံး မဖတ်ဖြစ်လိုက်ဖူး။ တောင်းပန်ပါတယ် မီးငယ်ရေ။
မီးငယ်ရဲ့  ပထမဆုံး တင်ပြထားတဲ့ ကောင်းမလေး တစ်ယောက်အကြောင်းက တော့ အတော်လေးကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ စဖတ်ဖတ်ချင်း မီးငယ် သူ့အကြောင်းသူ ရေးထားသလားလို့တောင်ထင်သွားတယ်။ ဖတ်နေရင်းနဲ့မှ အော်မဟုတ်ပါလားပေါ့။ အဲဒီထဲက ကောင်မလေးနာမည်က ရွှေအင်ကြင်းညိုတဲ့။ အတော်လေးကို အတ္တကြီးတဲ့ ကောင်မလေးလို့ပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်ရသူပေါ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့  ဖြစ်နေကြသဘောတရား တစ်ခုလို့ ပြောရင်လည်း ရမယ်ထင်တယ်။
အင်ကြင်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဘ၀မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကြမ်းတမ်းမှုတွေ ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ သူမချစ်တဲ့ မောင်နဲ့ ဆုံဆည်း လက်ထပ်ဖြစ်ပြီး လောကကြီးကို အပေါ်ကနေ ငုံ့ကြည့်နိုင်တဲ့ ဘ၀ရောက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်လို့ ပြောလို့ရမယ်။ သူမရဲ့  မောင်က အောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်လို့ ဆိုပါတယ်။
အတိတ်ဘ၀မှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူတဲ့ နာကြည်းမှုတွေကို လက်ရှိဘ၀ အောင်မြင်နေတဲ့ သူမ မောင်အရှိန်အ၀ါနဲ့ လောကကြီးကို ငုံ့ကြည့်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းဖတ်ရတာ အတော်လေးကို ကောင်းပါတယ်။
မောင့်ရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုနဲ့ ပိုက်ဆံတွေက ညို့  အကြောက်တရားကို ကာကွယ်ပေး၏
လူသားတစ်ယောက်ရဲ့  အကြောက်တရားတွေကို ပီပီပြင်ပြင် ဖော်ကြူးရေးသားထားတာ အတော်လေးကို ဖတ်လို့ကောင်းသည်။ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တတ်တဲ့ လောဘ မာန်မာန တွေကို မြင်သာအောင်ရေးထားသည်။ လောကဓံကို ကြုံရမှာ ကြောက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပုံကို ရွှေအင်ကြင်းညိုက အပြည့်အ၀ သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
အနှေးပြကွက်များ ဆိုတဲ့ အတိုင်း ရွှေအင်ကြင်းညိုအကြောင်းကို အနှေးပြကွက်များနှင့် ဖတ်လို့ အလွန်ကောင်းသော စာမျက်နှာများပင် ဖြစ်သည်။
This entry was posted on Wednesday, March 3rd, 2010 at 6:28 am	and posted in ရောက်တက်ရာရာ.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
« ကျွန်တော်နှင့် မအူပင်
ခွဲခွာခြင်း စက်ဝိုင်း »